Loolan adag oo ku saleysan wasiirada oo ka bilawday beesha Ceyr iyo liiska shaqsiyaadka doonaya xilalka - Caasimada Online
Home Warar Loolan adag oo ku saleysan wasiirada oo ka bilawday beesha Ceyr iyo...
Loolan adag oo ku saleysan wasiirada oo ka bilawday beesha Ceyr iyo liiska shaqsiyaadka doonaya xilalka
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo ay socdaan weli shirarka ku aadan magacaabista golaha wasiirada oo uu wado Ra’isulwassaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa soo baxayo war sheegayo inuu loolan xooggan ka dhex bilawday Beesha Ceyr ee Habargidr ka tirsan markii ay soo baxeyn shaqsiyaad badan oo doonayo inay helaan wasiir.
Xog hoose oo ay heshay Caasimadda Online ayaa xaqiijinayo inay jiraan siyaasiyiin badan oo kasoo jeedo beeshaan kuwaas oo doonayo inay xil wasiir ka heleyn golaha wasiirada ee dhawaan lasoo dhisayo.
Sidoo kale waxaa jiro shaqsiyaad kale oo iyagana daba ka riixayo kuwa kale oo ay la doonayaan in wasiir laga dhigo, waxayna midaas beesha ka dhex dhalisay loolankii ugu weynaa oo la mid ah midkii ay isku khilafeyn xilligii ay baadi goobka ugu jireyn xilka Ra’isulwasaaranimo oo ay isku soo taageyn siyaasiyiin badan.
Liiska Shaqsiyaadka beeshaas kasoo jeedo ee xilka wasiir raadinayo
Eng. Sabriye oo ka mid ah madaxda Nationalink
Saciid Nuur Giriish
Cabdisamad Macalin Maxamuud
Sidoo kale waxaa jiro shaqsiyaad kale oo beeshaas ka mid ah oo daba ku wato kuwa kale oo ay la rabaan in xilal loo magacaabo waxaana kamid ah shaqsiyaadkaas: Maxamed Daylaaf, Shiikh Shaakir iyo Xuseen Goley.
Inkastoo aan la garaneyn dadka ay wadaan shaqsiyaadkaan haddana waxaa soo baxayo warar sheegayo inay yihiin seddexdaan shaqsi kuwa saameyn ku leh beesha Ceyr.
Loolankaan ayaa muujinayo inuu shaqsi kasta si gaar ah u doonayo xil , mana jiro mowfiq mideysan oo ay leeyihiin beeshaan oo ku aadan wasiirada.